सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १८
कल्पना गर्नुहोस्, मान्छेले बनाएको रोबोट मान्छेभन्दा चलाख भइदिए यो ‘सिस्टम’ ले कसरी काम गर्ला?
त्यस्तो अवस्थामा रोबोटको अगाडि उसको सृष्टिकर्ता मान्छे नै निरीह सावित हुने क्षण आउन सक्छ।
यस्तै अवस्था परिकल्पना गरेर हलिउडमा थुप्रै फिल्म बनेका छन्। बलिउडमै पनि केही वर्षअघि रजनीकान्तको ‘रोबोट’ फिल्म रिलिज भएको थियो, जसमा वैज्ञानिकले बनाएको रोबोटले मान्छेभन्दा पनि अगाडिको सोचेर विध्वंस मच्चाएको थियो। र, यो विध्वंस रोक्न अन्ततः त्यो सिस्टम नै खतम गर्नुपरेको थियो।
यस्तै अवस्था झेलेको छ, अग्रणी सामाजिक संजाल कम्पनी फेसबुकले। कम उमेरमै अर्बपति भएर विश्वभर तहल्का मच्चाएका मार्क जुकरवर्ग आफैंले बनाएको रोबोट सामू असफल सावित भएका छन्।
फेसबुकले केही समययता बनाइरहेको रोबोटमा यो समस्या आएको हो। फेसबुक पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्स (एआइ) व्यापक काम गरिरहेको छ।
यसैक्रममा कम्पनीले बनाइरहेको एक सिस्टमका रोबोटले मान्छेले नै नबुझ्ने भाषामा कुरा गरिदिएपछि प्रविधि क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको हो।
सिस्टमअनुसार ती रोबोटले अंग्रेजी भाषा बोल्नुपर्ने थियो। अनुसन्धानकर्ताले काम गर्दागर्दै ती रोबोटले अंग्रेजीको साटो अर्कै भाषामा सूचना आदानप्रदान गर्न थाले। रोबोटबीचको भाषाको त्यो प्रक्रिया रोक्न नसकेपछि कम्पनीले पूरा सिस्टम नै बन्द गर्नुपर्यो।
फेसबुकको यो घटनाले प्रविधि क्षेत्रका उदीयमान प्रतिभा एलन मस्कको भनाइ सही सावित गरेको छ। केही दिनअघि जुकरवर्गले फेसबुकमा एक लाइभ भिडियो पोस्ट गर्दै आफूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (रोबोट) मा धमाधम काम गरिरहेको बताएका थिए।
त्यसमा टिप्पणी गर्दै अमेरिकाको अटो कम्पनी टेस्लाका सिइओ मस्कले भनेका थिए, ‘जुकरवर्गलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बारे थोरै मात्र ज्ञान छ।’
उनको यो भनाइ धेरैले रुखो भनेपनि तर्कपूर्ण मान्नेहरू पनि उत्तिकै भए।
जुकरवर्ग जति सहज र स्वतन्त्ररुपमा रोबोट निर्माणमा लागेका छन्, त्यो उनले सोचेभन्दा भयानक भएको मस्कको भनाइ थियो।
मानव जातिको अस्तित्वमै अतिक्रमण गर्नसक्ने हुनाले रोबोटसँग हामी डराउनुपर्ने भन्दै मस्कले प्रविधि विकासमा ऐन, नियम तथा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उनले भनेका छन्, ‘रोबोटले धेरै कुरा मान्छेले भन्दा राम्ररी गर्न सक्छ। यिनीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न नसके हामीलाई नै पूर्णरुपमा विस्थापन गर्न सक्छन्।’
फेसबुकले बन्द गर्नुपरेको सिस्टमले मस्कको कुरा पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ।
फेसबुकको रोबोटमा के भएको थियो?
कम्पनीले बनाएका दुई रोबोट, बब र एलिस आपसमा सूचना आदानप्रदान गरिरहेका थिए। यत्तिकैमा उनीहरु आपसमा आफैं नयाँ भाषा सिर्जना गरेर कुरा गर्न थाले।
बब र एलिस उनीहरुमाथि काम गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताको नियन्त्रण बाहिर पुगेर मान्छेले नै नबुझ्ने भाषामा संवाद गर्न थाले।
अनुसन्धानकर्ताले संवाद छिटो र सरल होस् भनेर ती रोबोटमा अंग्रेजीबाहेक अरु कुनै भाषा राखेका थिएनन्। तर, उनीहरुले नयाँ भाषा बनाए र सूचना आदानप्रदान गर्न थाले।
यो प्रक्रिया रोक्न नसकेपछि फेसबुकले त्यो पूरा सिस्टम नै बन्द गरिदियो।
यो घटनाले प्रविधि विकासमा अन्धाधुन्ध होमिएका कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ।
रोबोटहरु आपसमा आफ्नै भाषामा कुरा गर्न थाले के हुनसक्छ?
यसबारे वैज्ञानिकहरुले एक विश्लेषण दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार रोबोटहरु आफैं मान्छेले नबुझ्ने नयाँ भाषा बनाउँदै कुरा गर्न थाले भने, विस्तारै यी मान्छेको नियन्त्रण बाहिर जानेछन्। रोबोटहरुले केबारे कस्ता कुरा गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न मान्छेले सक्दैनन्।
रोबोटको काम गर्ने क्षमता यकिन नहुनाले उनीहरुले भित्रभित्रै के के गर्छन् भन्ने पनि मान्छेले बुझ्न सक्दैनन्। यो प्रक्रिया बढ्दै गए, रोबोटहरुलाई मान्छेको जरुरत नै पर्दैन। उनीहरु आफैं काम गर्न थाल्छन्। यसले अन्ततः मान्छेलाई विस्थापन गर्नेछ।
फेसबुकले भोगेको यो घटना रोबोट विज्ञानमा त्यति आम कुरा नभएपनि यसलाई हलुका रुपमा लिन भने नहुने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरुले सर्तक गराएको यो घटना हलिउड–बलिउड फिल्ममा गराए जस्तै हो।
(टेकटाइम्स लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमका सहयोगमा)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १८, २०७४, ०६:३६:५१
ओप्पो अब यूकेमा
टम्बो मोबाइल ब्राण्ड नेपाली बजारमा आउँदै